Jamaika : Maty Ny Jiro Amin’ny Alina ; Afaka Madiodio Ireo Mpanao Politika Voarohirohy Aminà Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2014 23:06 GMT
Nadaboka ilay vesatra fanenjehana ny minisitry ny angovo Jamaikana teo aloha, Kern Spencer (sy ny mpanampy azy ramin'izany fotoana izany, Colleen Wright), mikasika ilay hosoka sy famotsiam-bola rehefa nohamafisin'ny Mpitsara ao an-toerana, Judith Pusey ny fangatahana fanafoanana fitoriana nataon'ny mpisolovava azy ireo. Ity raharaha ity dia vokatr'ilay antsoina hoe Tantara Maloton'ny Takamoa Kiobàna izay niafara tamin'ny fivarotana tamin'ny vidiny JA$276 tapitrisa (eo ho eo amin'ny 2,5 tapitrisa dolara Amerikana) ireo takamoa mitsitsy nomen'ny fitondrana Kiobana izay tokony ho nozaraina.
Nisy lahatsary azon'ny rehetra nojerena tamin'ny 2007 mampiseho an'i Kern Spencer gina tsy nahateny tao amin'ny parlemanta, fony mbola ny Jamaica Labour Party no teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana, izay nanery azy hamaly ny momba ny fandaharan'asa amin'ny fizarana ireo takamoa :
Bitsihin'ny mpanao gazety Emily Crooks ny fivoaran'ny zava-mitranga :
Nisintona ny fisainan'ny maro ny fanapahan-kevitry ny mpisara, tsy noho ny fisiana vesatra nanenjehana mpanao politika ihany fa noho ilay raharaha mampitombo ny ady hevitra momba ny rafi-pitsarana Jamaikana. Maro amin'ireo mpanao fanadihadiana no mampitaha io raharaha io amin'ilay didim-pitsaranan'ny Vybz Kartel vao haingana. Nanontany tena ny mpitoraka bilaogy ao amin'ny Yardflex raha toa ka misy ny lalàna modely roa:
Tsy tokony hiantsampy amin'ny fangalàna tsoa-kevitra momba ny rafi-pitsarana Jamaikana aminà tranga tokana ny olona hoy i Dee Nadz Tine :
Roa herinandro izay, nankasitrahana ny fitsarana an'i Kartel Murder, ankehitriny ireo olona ireo ihany no diso fanantenana sy mitomanin'ny henatra amin'io rafi-pitsarana io… Aza avela hitarika antsika haka tsoa-kevitra ny zava-mitranga sy ny vokany ; aza omena alàlana akory ny fankahalàna, ny hatezerana, ny fitiavana, ny halemem-panahy, ny fanekena ny hevitra politika hamoahantsika didy #‎ourjusticesystemisbroken‬ ‪#‎admitit‬ ‪#‎itcouldfailyoudirectly‬
Aza anontaniana akory hoe natao ho an'iza ny fitsarana @iamthekartel, Indrisy ! tsy natao ho anao izany #KERNSPENCERFREED
Nanao ny TSY RARINY GOAVANA i Kern Spencer tamin'ny fandrenesana fa TSY MISY ANTONY ANENJEHANA azy taorian'ny 6 TAONA NIAMPANGANA azy @emilynationwide @nemsfrancis
Nolazain'ny sasany fa fandaniana andro daholo ireny zavatra natao rehetra ireny:
Avy amin'i Angela Mabray ireo sary kely ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity ary nampiasaina ny lisansa Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny tahitn-tsar mifandimbin'i Angela Mabray ao amin'ny flickr.